Santiago Solari Oo Saxaafada Ku Eedeeyay In UEFA Ay Baadhitaan Ku Samaynayso Kaadhkii Digniinta Ahaa Ee Sergio Ramos. - GOOL24.NET
Santiago Solari Oo Saxaafada Ku Eedeeyay In UEFA Ay Baadhitaan Ku Samaynayso Kaadhkii Digniinta Ahaa Ee Sergio Ramos.
Tababaraha kooxda Real madrid ee Santiago Solari ayaa difaacay kabtanka kooxdiisa ee Sergio Ramos wuxuuna Solari saxaafada ku eedeeyay in ay iyagu abuureen sababta keentay in xidhiidhka kubbada cagta Yurub uu baadhitaan rasmi ah ku wado dhacdadii uu Ramos kaadhka digniinta ah ku qaatay kulankii Ajax.
Inkasta oo Sergio Ramos ahaa shaqsigii biyaha kulul naftiisa ugu dhex riday hadalkii uu saxaafada ka hor sheegay kadib guushii kulankii Ajax, haddana Santiago Solari ayaa ku dooday in saxaafadu ahayd kuwa sababta u noqday in UEFA ay baadhitaan ku samaynayso Ramos.
Laakiin xataa hadalka uu Solari iskugu dayay in uu ku difaacao Ramos ayaa laga fahmi karayaa in wali ay xaaladu xun tahay wuxuuna Solari isku dayay in uu sharaxo hadalkii muranka badan dhaliyay ee uu Ramos saxaafada ka hor sheegay balse wali muranka ayaa sii socda.
Solari oo ka hadlaya arinta Ramos ee kaadhkii digniinta ahaa ayaa yidhi: “Aniga oo ixtiraamaya Sergio, isagu waxa uu si cad u bixiyay sharaxaad, wuxuuna sheegay in uu tix raacyay in uu qasbo qaladka ee ma aha in uu kaadhka digniinta ah qasbo”.
Laakiin Solari ayaa saxaafada ku eedeeyay in ay Sergio Ramos hor dhigeen su’aal farsamaysan isla markaana waxa uu saxaafada ku duray in ay sabab u yihiin xaalada uu Ramos ku jiro iyada oo la filayo in uu ganaax laba kulan ay UEFA kala kulmi doono.
Solari oo saxaafada eedayn ugu soo jeedinaya su’aashii ay Ramos waydiiyeen ayaa yidhi: “Sergio waxaa la waydiiyay su’aal farsamaysan. Idinka (saxaafada) habkiina ayaad leedihiin, way fiican tahay laakiin isaga naftiisa ayaa sharaxay”.
Hadalka Santiago Solari ayaan waxba ka badalayn baadhitaanka UEFA iyada oo Sergio Ramos uu laba jeer isku dayay in uu dib u saxo hadalkii ka dhacay kadib guushii Ajax ee uu ku cadeeyay in uu doonayay sidii uu u nasan lahaa kulanka Bernabeu.
Sidoo kale waxaa soo baxay muuqaal uu Sergio Ramos ciyaartoyda kooxdiisa ku waydiinayay in uu kaadhka digniinta ah raadsado waxayna UEFA soo saari doontaa go’aanka baadhitaankeeda iyada oo Ramos uu hadda sugayo inta kulan ee lagu ganaaxi doono.